I-Huawei Watch 3 neFreeBuds 4, ukubheja ekugcineni okuphezulu kokugqokekayo | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | 02/06/2021 19:25 | General, Izaziso
Inkampani yase-Asia yenze isethulo samazwe omhlaba lapho isivumele khona ukuthi sibheke kuqala izindaba ezizofika kwikota elandelayo. Ngokushesha sizoba nethuba lokukulethela ukuhlaziywa okujulile kwawo wonke la madivayisi, okwamanje sizokutshela ukuthi ziyini izindaba zabo.
IHuawei iguqula imakethe ibheke phezulu ngeHuawei Watch 3 entsha neWatch 3 Pro ephelezelwa ngomsindo ohamba phambili ngama-headphone ayo we-TWS FreeBuds 4. Ake sibheke ukuthi konke ukuthuthuka okuthenjiswa nguHuawei ngamadivayisi ayo amasha kuqukethe ini nokuthi kufanele yini ukubheja kuzo zonke lezi zindaba.
1 I-Huawei Watch 3 ne-Watch 3 Pro
2 I-Huawei FreeBuds 4
I-Huawei Watch 3 ne-Watch 3 Pro
Siqala ngewashi elisha elivela enkampanini yase-Asia, lamukela ukwakheka okuyindilinga ngokwakhiwa okuthe xaxa kancane. Izoqhubeka nokuhambisana nenkinobho yomshini, noma kunjalo kulokhu bafake "umqhele" oyisiyingi ozosivumela ukuthi sihlanganyele IHarmonyOS 2 njengohlelo Lokusebenza. Bobabili bazofaka iphaneli 1,43 ″ AMOLED enezinombolo eziyi-1000, kuyilapho inguqulo ye- "Pro" izoba ne-sapphire crystal.
I-Hi6262 izoba iprosesa enakekela umsebenzi kanye ne-2 GB ye-RAM ne-16 GB yesitoreji esiphelele. Sizoba nokuxhuma kwe-4G nge-eSIM, ukuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo, inzwa yeoksijini yegazi, iWiFi, iBluetooth 5.2 futhi kunjalo I-NFC. Lokhu kuzosivumela ukuthi sibuyekeze imingcele eminingi, futhi silandele ukuqeqeshwa kwethu nge-GPS, okuzoba isiteshi esimbili esimweni sePro version. Asinalo usuku olusemthethweni lokuqalisa noma inani elilinganisiwe.
I-Huawei FreeBuds 4
Isizukulwane sesine samahedfoni aziwa kakhulu omkhiqizo sifika ngombala othokozisayo necala lokushaja elibonakalayo. I-Huawei manje ibenze bahlangana kakhulu, bakhanya futhi ngombono baba namandla kakhulu. Bazonikela ngokuxhuma kwe-Bluetooth 5.2 nebhethri elingu-30 mAh ku-earbud ngayinye ene-410 mAh ecaleni lokushaja.
Ngale ndlela sizoba nayo Amahora ama-4 okuzimela kumahedfoni kanye namanye amahora angama-20 kuleli cala. Singazixhuma kumadivayisi amabili ngasikhathi sinye ngenxa yokuxhuma okubili nge-90 ms kuphela ye-latency. Manje usunayo i- Ukukhanselwa komsindo okusebenzayo kunamandla amakhulu kuze kufike ku-25 dB yize kungenawo amadivayisi wokuzihlukanisa. Iphinde izuze njengefa ukusebenza kweFreeBuds 3 nokuxhuma kwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Huawei Watch 3 neFreeBuds 4, ukubheja ekugcineni okuphezulu kokugqokekayo